Ahoana ny fametrahana ny fanarenana voaova, (CWM) ao amin'ny LG Optimus 3D | Androidsis
Tamin'ny fampianarana teo aloha dia nasehoko anao ny fomba tsotra indrindra hamaka ity terminal mahafinaritra ity amin'ny LG, ary nampanantena azy ireo koa aho fa amin'ny manaraka dia hampianariko azy ireo Ahoana ny fametrahana ClockWorkMod Recovery hahafahana mamelatra romana masaka avy any.
Eny, araka ny nampanantenaina dia trosa, ary tiako ny mandoa trosa, eto no mandeha ilay fampianarana nampanantenainal ao anatin'izany ny fitaovana ilaina sy ny dingana manaraka.
2 Fanomanana ny telefaona
3 Mametraka ClockWorkMod Recovery
Ny voalohany indrindra dia ampidino ireo rakitra ilaina mametraka tsara ny fanarenana voaova ao amin'ny terminal anay, raha vantany vao alaina ny zip mifandraika amin'izany, dia hofongorinay amin'ny toerana rehetra izy io PC ary ho vonona amin'ny dingana manaraka isika.
Fanomanana ny telefaona
Amin'ny telefaona dia tsy maintsy manamarina izany isika alefa ny deboka usb, ity dia hita ao amin'ny menio fandaminana, fampiharana, fampandrosoanaAo no tokony hananantsika ny boaty mifanaraka aminy voafantina.
Soso-kevitra ihany koa ny hampidinana vola mihoatra ny dimampolo isan-jaton'ny fahaizany, na dia hisorohana olana aza, dia manoro hevitra anao manokana aho fa halefa hatramin'ny 100 X 100.
Afaka isika izao ampifandraiso amin'ny solosaina ny finday mampiasa tariby usb mifanaraka aminy ary mankanesa amin'ny dingana manaraka.
Raha vantany vao voamarina io voalaza etsy ambony io, dia handeha any amin'ny folder tsy misy zip isika, ary ao anatiny dia hahita rakitra roa isika, tsy maintsy manatanteraka ny LG-P920_offline_Rec Recovery-Toolkit_XDA-Edition.exe
Tsy maintsy misafidy ny safidy voalohany na faharoa, satria ny voalohany dia sanatria raha te-hamerina ny Fanarenana orinasa.
Vantany vao voafantina ny safidy mifanaraka amin'izany dia hiseho ny varavarankely toy izao:
Kitiho ny bokotra goavambe Andao hatao! ary ny programa dia hanomboka hametraka ny Recovery, hahazo iray isika fandrosoana ny fametrahana toa izao ary rehefa vita ny fampitandremana fa niasa tsara ny zava-drehetra ary vita soa aman-tsara.
Amin'izany dia efa nametraka ny ClockWorkMod Recovery ao amin'ny LG Optimus 3D ianao, raha te hiditra ao aminy dia tsy maintsy manao ireto bokotra manaraka ireto ihany isika:
Manomboka amin'ny finday dia hovelomintsika amin'ny alàlan'ny fanindriana ireo bokotra ireo amin'ny fotoana iray. 3D key plus volume minus plus power button, indray mandeha ny sary famantarana ny LG eo amin'ny efijery dia hamoaka ny bokotra herinaratra isika ary rehefa esorina ny sary famantarana dia hamoaka ireo lakilasy roa hafa isika.
Soso-kevitra amin'ny fotoana voalohany hidirantsika ny Recovery manao Famerenana ny rafitra rehetra tany am-boalohany.
Fanazavana fanampiny - Ahoana ny famongorana LG Optimus 3D
Ampidino - Fitaovana ilaina
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » LG » Ahoana ny fametrahana ClockWorkMod Recovery amin'ny LG Optimus 3D
mozkera dia hoy izy:
Niasa lavorary tamin'ny LGP920H niaraka tamin'ny froyo 2.2.2 (Claro - Colombia)
Mamaly an'i mozkera
Manana fanontaniana aho, ampiasaina hametrahana ROM am-boalohany ve ity? Izy ireo dia notsofin'izy ireo ny ROM ihany ny CWM tavela fa rehefa te-hametraka ny ROM amin'ny sd izy dia tsy mijanona izany, miverina ao amin'ny CWM ...
Jelly Bean rom voalohany avy amin'i DerTeufel1980 ho an'ny Samsung Galaxy S (GT-I9000)
Ahoana ny famongorana LG Optimus 3D